Xog-warran xasaasi ah: Faanka Farmaajo iyo fahanka bulshada - Caasimada Online
Home Maqaalo Xog-warran xasaasi ah: Faanka Farmaajo iyo fahanka bulshada
Xog-warran xasaasi ah: Faanka Farmaajo iyo fahanka bulshada
Inuu dhisayo ciidanka qalabka sida
Inuu la dagaallamayo musuqa
Inuu noqonayo nabaddoon Soomaaliyeed
Inuu la dagaallamayo kooxaha xagjirka ah
Inuu ciddii qarax wax ku noqoto magdhaw nafeed iyo maal la siinayo
Inuu ciddii qarax sheegta abaalmarin weyn siinayo
Inuu bulshada ka ilaalinayo dadka fashilmey ee hore loo bartey
Inuu siyaasadiisa ku saleynayo caddaalad iyo sinaan
Inuu dhisayo ciidanka oo ah hawl culus, si loo helo ciidan tayeysan, waxaa dhacday in ciidankii uu hammiga geliyey ilaa maanta aysan qaadan mushahar xitaa intii loollanka lagu jirey dowladdii hore, taasoo keentay iney gadoodaan oo ka baxaan furimihii dagaalka, magaalada caasimadda ahna xirxirtaan.
Inuu musuqa la dagaallamayo; musuqmaasuqa ugu weyn waa in xilka loo dhiibo qof aan u qalmin gudanna karin waajibaadkiisa. Qof aan lahayn karti iyo aqoon uu ku maareeyo, waxay la mid tahay iyadoo la yiri baabuur wade ha ka noqdo nin aan haysan ruqsad wadennimo, sidoo kalena aanan baran una billowneyn inuu baabuur wado. Waana tan maanta ka taagan maamulka dowladda cusub, oo dhammaantood ku asteysan dad aan lahayn tayo iyo tamar ay wax ku taraan.
Inuu noqonayo Nabaddoon Soomaaliyeed; arrintani waa mid beenoowday, waayo dadka uu soo duggaashaday dhammaantood waa dad uu ku xushay inay yihiin kuwa naftooda maahine aan dad iyo dal waxba ka gelin oo isaga u noqonaya madiidin iyo qawsaarro u adeega, kuwo taageersan oo u qaada heesaha: Noolow ma daale!
Inuu la dagaallamayo kooxaha xagjirka ah,: Dowladdu ilaa hadda ma qaadin tallaabo ka dhan ah kooxaha xagjirka ah oo awoodeystey qaraxana ka dhigay maalinle iyo saacadle ah, tan oo noqotey waxyeello cusub oo soo korortey. Dadweynihiina waxaa durbaba galay dareen ah “Halkii caad laga sugayey ceeryaamaa ka timid! Oo halkii waxqabad laga sugayey waxaa ka yimid dib u dhac iyo dalanbaabi cusub.
Wuxuu ballanqaaday in ciddii qarax wax ku noqota uu magdhaw nafeed iyo mid hantiyeedba isagu bixin doono, isagoo ku sababeeyey inuu dayacay ammaankooda isagana xil ka saaran yahay, haddaba arrintani ma dhicin waxayna kor u dhaafayaan muddada labada bilood iyo shanta maalmood ah, dadka sida bareerka ah loo dilay iyo kuwa qaraxyada ku dhintey 300 iyo dheeraad, taasoo ka dhigan in maalin walba 5 qof dhimanaysay 60/300= 5. Haddaba is weydiintu waxay tahay aaway? Yaa maqlay? Yaa arkay meel magdghaw lagu bixiyey?
Wuxuu ballanqaaday in ciddii qarax sheegta, uu siinayo abaalmarin, waxaan ognahay tiroba afar jeer in la sheegay qaraxyo badan oo dhallinyaro iyo dadweynaha qaar ka mid ah ku dhiiraadeen, ballanqaad iyo abaalmarin la fulliyo iska daaye dadkii ayaa qaxay oo cararay markii xitaa ay waayeen cid ammaankooda sugta waayo waxay halis geliyeen naftooda.
Madaxweynaha oo ka hadlayey kulan uu la yeeshay bulshada ku dhaqan Kenya ayuu ku ammaanay ganacsatada inay yihiin dad fiican oo ay xushaan dad wanaagsan, wuxuu sidoo kale sheegay in siyaasigana lagu xusho astaamo wanaagsan oo ammaano iyo hawlkarnimo leh, balse, arrinkaas waxaad mooddaa sida aynu marag ka nahay inuu madaxweynuhu sheegay wax uusan isagu fulin waana tan ka muuqata xulashada dadka uu xulanayo oo maqaam ahaan iyo milge ahaanba liita intooda badana ku caan baxay musuqmaasuq iyo wax isdaba marin xil gudasho la’aan.
Wuxuu ballanqaaday inuu siyaasadiisa ku saleynayo sinnaan iyo caddaalad, haddaba sinnaantu waa in dadku u siman yihiin maamulka, shaqada, xulashada iyo waxqabadka dowladda.